Mayelana NATHI | Doc.com
Ngena ngemvume njengodokotela Bhalisa njengodokotela noma uchwepheshe wezokwelapha
I-British Indian Ocean Territory
I-Central African Republic
I-Congo I-Democratic Republic Of The
I-Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
I-Hong Kong SAR
I-Northern Mariana Islands
I-Papua entsha eGuinea
I-Sao Tome ne-Principe
I-Territory Territory Egcinwe
I-United States Minor Outlying Islands
I-Vatican City State (i-Holy See)
IziTurkey NeziQhingi zaseCaicos
Izindawo zaseFrance zaseNingizimu
Iziqhingi zase Cook
Iziqhingi zase-Wallis ne-Futuna
Iziqhingi zaseSvalbard naseJan Mayen
Iziqhingi zaseVirgin (US)
Iziqhingi zaseVirgin (eBrithani)
Iziqhingi zeCocos (Keeling)
Saint Kitts noNevis
Saint Pierre noMiquelon
Saint-Martin (ingxenye yesiFulentshi)
Umuntu (Isle of)
Wezwa kanye neziQhingi zaseMcDonald
Bhalisa njengodokotela noma uchwepheshe wezokwelapha
IDoc.com yaqalwa ngenhloso yokunikeza umhlaba indlela entsha yokunakekelwa kwezempilo okuyisisekelo okusimeme futhi okunganciki ezinhlelweni zendabuko zokunakekelwa kwezempilo ezikhona kuzo zonke izingxenye zomhlaba.
Kuze kube manje iDoc.com inikeze izinsizakalo zezempilo mahhala ngemali yezinkulungwane zeziguli emazweni angaphezu kwama-20 ezithuthukisa izimpilo zazo. Lokhu kufezekiswe ngokwakha uhlobo olusha lwebhizinisi ukwenza i- "Free Basic Healthcare" itholakale kunoma ngubani okwazi ukusebenzisa ikhompyutha noma i-smartphone.
UCharles Nader wethule imodeli entsha yebhizinisi kothisha bakhe kuhlelo lweStanford's Blitzscaling olwaluhlanganisa noRied Hoffman, umsunguli we-Linkedin noChris Yeh, umbhali webhizinisi owaziwayo kanye nongxiwankulu wokuzibandakanya. Ngemuva kokuthola impendulo enhle noChris Yeh ebiza imodeli ye-telemedicine ngomkhiqizo we-10X, inkampani yaqoqa imali yokwakha ingxenye yayo yedatha ye-blockchain nokwandisa izinsizakalo kwamanye amazwe angaphandle kweMexico. Lokhu kunikeze inkampani amandla okwandisa emazweni angaphezu kwama-20 eLatin America futhi yenyusa intuthuko yayo ukunikela ngemikhiqizo enamandla kakhulu, kumakhasimende amaningi, kanye nokwenza ngcono futhi kuthuthukise inkampani njengokuthenga igama elithi Doc.com nokukhulisa ukuthuthukiswa kobuchwepheshe kanye nebhizinisi kweminye imikhakha yesikhala sokunakekelwa kwezempilo. IDoc.com yandise izinsizakalo zayo ngokungeza ukulethwa kwemithi ekhaya eMexico futhi yaba ngumhambisi wemithi eLatin America. UCharles Nader, isikhulu esiphezulu seDoc.com, uboniswe ku-Cover of Forbes magazine omele iDoc.com kabili. Lo magazini ubhekise kule nkampani njenge-unicorn yaseLatin America futhi kukhulunywe ngayo nakwezinye izincwadi eziningi nakwezokuxhumana.
Namuhla, iDoc.com inikela ngezinsizakalo zayo ze “Free Basic Healthcare”, kanye nezinsizakalo eziphansi ze-premium, ngezilimi ezingaphezu kwekhulu ngefomethi yombhalo nangesiNgisi nangeSpanish ividiyo telemedicine ngeDoc App, emazweni angaphezu kwama-20 ikakhulukazi eLatin America kanye ne-US ngezinhlelo zokunweba emhlabeni wonke.
Amaklayenti afaka izinkampani zomshuwalense, i-Telecom, nezinye ezimbonini ezahlukahlukene. UDoc.com uphinde waba nguzakwethu osemthethweni nabahlinzeki bemithi yokugoma ngesikhathi sobhadane ukuhlinzeka ngemithi yeCovid emhlabeni. Ngalobu budlelwano, ngokuxhaswa ohulumeni. IDoc.com ingeza inani eminikelweni yayo yomkhiqizo ukusiza abantu abadinga usizo ngesikhathi sobhadane.
Ngokuqonda ukufinyeleleka kobuchwepheshe obuguqula umhlaba esihlala kuwo, iDoc.com ihlanganise ubuchwepheshe futhi yasungula imodeli entsha yebhizinisi eyondla etholakala kuma-epidemiological analytics, i-blockchain crypto-economy, i-telemedicine nokuthengiswa kwemithi ukunikeza iziguli eziningi mahhala izinsizakalo zezempilo. Ngokuyisisekelo ithuthukise uhlelo oluzimelelayo olungasebenzi nje kuphela njengethuluzi lesayensi ukuze kuzuze isintu, kepha futhi luhlinzeka ngosizo oludingekayo kubantu abaswele emhlabeni wonke ngalokho esikholwa ukuthi kuyisici esibaluleke kakhulu empilweni… Ezempilo.
Ngoba ngaphandle kwempilo, kungaba impilo yengqondo noma impilo yomzimba; Ubuntu abukwazi ukufeza okusemandleni.
Ukunakekelwa Kwezempilo Okuyisisekelo kwabo bonke abantu ... Ilungelo Lomuntu ... I-Doc iletha inguqulo yethu eqhubeka ithuthuka futhi ikhula njengoba isikhathi sihamba ngendlela ekhanyayo ebheke esikhathini esizayo kanye nemiphumela engalinganiswa. Ukuphila kube nomthelela omuhle.
Odokotela abaseduze kwami
Iwebhusayithi ithuthukiswe ngu Lou.